Paunotanga mucheka iwe unoda kuita mari, nyanzvi dzichakuudza kuti uwedzere yako fungisisa pane zvinoita kuti uwane mari uye siya zvese zvimwe kunze kwebhuku. Iwe unoziva zvakakosha kuti uvharire yakatarwa misoro mune yako niš kuitira kuti uite mari kubva kushambadzira uye yekutsvaga liiklust, asi iwe zvakare unoda uye unofanirwa kuvhara misoro iyo yakasarudzo pane yako chiratidz.
1 Dzokera Kuzvinyorwa: Sei Wakatanga ajaveeb yako?
4 TL; DR: viis takeawayt
Taura somuenzaniso kuti cheki yako yose inopikisana pfungwa dzakawanda mune imwe nišš nokuti unotenda kuti iwe unopa chimwe chinhu chakanaka-ungaita sei mari pane chimwe chinhu chinobvunza chimiro cheo kana andmed yako yose inobva kune mazko?
Ndipo apo smart bratch inouya mukutamba. Iko kutora izvo maitiro, andmed uye mazwi uye kuashandura kuva chinhu icho chakasarudzika chako, chinotaura nezwi rako.
Saka kana iwe usati watanga blogging kungoita imwe mari kubva kuAdense liiklus, chinyorwa ichi chinokutungamira kuti uite mari yako ajaveeb. uye kukura marimi ako.
Dzokera Kuzvinyorwa: Sei Wakatanga ajaveeb yako?
Hazviiti, hazvo? Rudyi! Semuenzaniso, ndine bhajiro mukupa simba veebimeistrid nevatengesi nekupikisana neGoogle-inogamuchirwa SEO chero ipi zvayo inonzwisisika – uwe iwe unoziva, izvi hazvisi zvakakwana zvachose, kunyange zvazvo bhuti ranna richiri kukava.
Ichokwadi, bhujandi yangu haisi iyo yakanaka yekubudisa mashoko kune veebimeistrid vanoedza kuita kutiGoogle ifare kana kushandiswa chete "nzira dzakagamuchirwa" dzekuwedzera bhuti yebhugi.
Zvimwe zvezvinhu zvandino kusimudzira hazvikurudzirwe kana kuti zvakanyanyisa, ivo vanonyanya kufunga veGoogle, vanotungamira webhusaiti havangashandisi izvo blog yangu inoparidza zvachose. Wakatanga ajaveeb yako kugovana chimwe chinhu chakasiyana, chinotaura nezvenyaya dzako uye zvibodzwa, ütleb bhurogu yako inofarira chikamu chidiki chevateereri vako. Chikamu changu, cheblogi mune yangu muenzaniso, ivo vese vari webmasters uye vatengesi vasingabvumirani neGoogle tsika uye inozivikanwa SEO uye yekushambadzira mazano.
semantilised jalajäljed uye kubatanidza izvi kutsvaga kwehutano ndicho chiyiko chaicho chekugadzira mabhizimusi mari. Ma ei tea, mida te vajate, kuid mis on uus, kui teil on rel = autor uye rel = tags muparidzijobbti me HTML yezvigwaro zvako. Izvi zvinokosha pakuvaka zvakadzama zvemashoko ako ezvinyorwa, kunyanya kuburikidza nekushandiswa kwemasangano evanhu, apo vanogadzirisa mabhuku vanogona kuchengetedza hurukuro inoshanda nekubatana kune mamwe mabhuku ebhulogi anowedzera hurukuro, uye inovandudza ruzivo rwemashini ekupedzisira kuburikidza nokunzwisisa zvakadzama kwe Nyaya. "
Gainsford anowedzera kuti kutanga nekusarudzwa kwemashamba ekutsvaga uye kutsvakurudza kunokosha kupedzisa pasi nišš yako uye kuchiratidza zvakanyanya, uye kuti iwe "unoda kuva nekunyatsonzwisisa kwehurukuro yako uye unokwanisa kushandisa izvi kunyora zvinyorwa zvebhuruti zvinosangana ne [vako] vateereri chaivo. "
Iyo yakareba nyaya ipfupi, haudi kuve zvakare imwe blogger inonyora nezve (isa nišš apa).
Muenzaniso: kana iwe uchitanga bhuku pane-unofanira kuva neNYV, iwe unoda kuvhara yose yeNNYU yaunonzwa vaverengi vanofanira nägi, asi kana iwe unonyatsoda iyo nyori munyori kana boka iroro revanyori vemahavaku vauunaku vauunaku vauunaku vauunaku vativa, vaiareni vaiareni, vaiareni vaiareni?
Vamwe vangaita kuti iwe uwirirane nemari, asi vanogona kuita kuti bhaibheri rako neet rako uye vanokubatsira iwe kugadzira zvinyatsobatanidza (pamwe nevanyori nevanhu vanovapoteredza).
Iti on unofarira kunyora nezvekudya, asi yako blogi ndeyese "pfura yakanaka" – iwe uchazoda kubatanidza imwe neimwe inoenderana neyududya-musoro wenyaya kune yako yakasarudzika chiratidzo, saka, semuenzaniso, ungangoda kutanga vähewi akakosha ane chekuita zvakananga zvekudya kudvavau kkovavau kkovavau kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuvakuu kouuu kouuu kouuu kouuvakuu kouuvakuvaga.
Imwe nzira ndeyekushandura dzimwe nguva kana hurukuro nišš nyaya dzine nyaya dzakasiyana nedzidziso yako uye basa.
Semuenzaniso, kana on uchitanga SEO ajaveeb, unogona kukurukura maitiro akaenzana neMuvhuro uye maitiro ako pachawo musi weChishanu. Chinhu chakavanzika ndechokuwana kuenzanisa pakati pezvose izvo munhu wese anozviziva uye anotarisa paIndaneti (iyo ndiyo yekutanga kwekutsvaga kwavo) uye USP yako uye maonero. Shandisa iyo yekare segoroko kuti ubudise marashi yako, uye chengetedza iyo yekupedzisira seyo feccrum yebasa rako rese.
Panopaan zviwuni zviviri zvemashoko uye muenzaniso wekukurukurirana kubva pamashoko.
Minu postitus Kingged -Kubatanidza maonero angu kune vateereri vepuratifomu kohta
Ehe, izvo zvinoreva kuti iwe unofanirwa kunzwisisa izvo zvinodikanwa uye zvinofarira zvevanhu vanoshandisa iyo chikuva. Kana usiri kuziva sei, apa unowana 12 nzira kuti uzviite, asi iwe wakanakisisa nagugesa nguva dzose kuverenga zvakanyanya sezvinobvira pane zvinyorwa zvakabudiswa uye zvakanakidzwa kuverengwa pachikuva.
Sezvaunodzidza chinangwa chako uye uchitaurirana, iwe uchatanga kuona maitiro anoita kuti zvinyatsogutsikana. Ma unokwanisa kusungira maitiro aya kune musoro waunoda kunyora pamusoro. Basa iri on rinotonyanya kukosha kana ukasarudza kuendesa mushanyi kune guru, munharaunda yakawanda (semu MOZ) uye iwe unoziva kuti chiratidzo chako hachifarirwi kana kuti chinopesana nemafungiro akawandisa.
Muchokwadi, iwe hausi kuzoda ‘kupfura’ meseji yako kune nharaunda (uye pamwe kukwezva vakatsamwa zvirevo kana troll), asi shandisa webhusaiti webhusaiti uye izvo zvakanyanya kugoverwa mapoinzi kubva kuna mame matbowa.
Kana izvo nezve kontoga zvemashoko kushambadzira semhando inonyanya kushanda yekushambadzira, asi unotenda izvozvo Quora inogadzira chisarudzo chakanaka, ona kuti ndeapi mararamiro ekutengeserana anokurudzira vanhu vari kutaura pamusoro pe kontoga, uye shandisa icho se konksu kuti upe mazano ehuwandu hweComora sezvimwe zvaunoziva zvinouya nezvimwe zvinobatsira, nezvimwewo.
TL; DR: viis takeawayt
Usangoite zvinoitwa nevamwe vese. Iwe unoda kuita mari sebhizinesi, see blogger inotarisa pane yakasarudzika chiratidzo, kuvaka yako yako.
Iva iwe pachako, iva nemutsa uye uvhurike kune mhinduro, shanda uchifarira chinyorwa chako uye shandisa blogi yako kuparadzira meseji yaunoda kuti nyika izive.
Edza kuyera pakati pekuita mari uye kuti usakanganwike. Kazhinji, kuisa mabhenefiti kuri ezvakanyanya kunaka uye kuunza chimwe chinhu chakakosha uye chine musoro kune nyika pane kungoita mari. Nutikas yekumaka iri kuisa pamwe izvo zvatova ipapo uye zvaunoda kupa, musanganiswa wakasarudzika yenzvimbo nišš uye USP, kuratidza chiratidzo chakasimba chisingaregi mari ichichivhiringidza.
Cherechedza nagugesa uye nagugesa chikamu chebasa rako rekubhura uye yeuka kuti sei wakatanga izvi zvose pakutanga.